1 Madzimambo 13:1-34
13 Zvino kwaiva nomunhu+ waMwari akanga arayirwa neshoko+ raJehovha kuti abve kuJudha aende kuBheteri, Jerobhoamu paakanga akamira pedyo neatari+ kuti akwidze utsi hwezvibayiro.+ 2 Akabva ashevedzera kuatari neshoko raJehovha akati: “Haiwa iwe atari, iwe atari, zvanzi naJehovha, ‘Tarira! Imba yaDhavhidhi ichaberekerwa mwanakomana, achatumidzwa kuti Josiya!+ Achabayira pauri vapristi venzvimbo dzakakwirira vari kukwidza utsi hwezvibayiro pauri, uye achapisira mapfupa evanhu pauri.’”+ 3 Akapa chiratidzo+ zuva iroro, achiti: “Ichi ndicho chiratidzo chataurwa naJehovha: Tarira! Atari ichatsemuka, uye madota ane mafuta ari pairi acharasika.” 4 Mambo paakangonzwa shoko romunhu waMwari wechokwadi raakanga ashevedzera kuatari yaiva muBheteri, Jerobhoamu akabva atambanudza ruoko rwake ruchibva paatari, achiti: “Imi, mubatei!”+ Ruoko rwake rwaakanga amutambanudzira rwakabva rwaoma, uye haana kukwanisa kurudzosa kwaari.+ 5 Atari yacho yakatsemuka zvokuti madota ane mafuta akarasika achibva paatari, maererano nechiratidzo chakanga chapiwa nomunhu waMwari wechokwadi achishandisa shoko raJehovha.+ 6 Zvino mambo akapindura munhu waMwari wechokwadi, akati: “Ndapota, kumbira kuti Jehovha Mwari wako andinzwire nyasha, undinyengeterere kuti ruoko rwangu ruporeswe.”+ Munhu waMwari wechokwadi akakumbira kuti Jehovha amunzwire nyasha, zvokuti ruoko rwamambo rwakaporeswa,+ rukaita sezvarwakanga rwakaita pakutanga.+ 7 Mambo akati kumunhu waMwari wechokwadi: “Handei tose kumba, udye zvokudya,+ ndikupe chipo.”+ 8 Asi munhu waMwari wechokwadi akati kuna mambo: “Kunyange maizondipa hafu yeimba yenyu,+ ndaisazoenda nemi+ ndodya zvokudya kana kunwa mvura munzvimbo ino. 9 Nokuti akandirayira saizvozvo neshoko raJehovha, achiti, ‘Usadya zvokudya+ kana kunwa mvura, uye usadzoka nenzira yawaenda nayo.’” 10 Iye akaenda neimwe nzira, haana kudzokera nenzira yaakanga auya nayo kuBheteri. 11 Zvino muBheteri maigara mumwe muprofita+ akanga akwegura, uye vanakomana vake vakasvika, vakarondedzera kwaari basa rose rakanga raitwa nomunhu waMwari wechokwadi zuva iroro muBheteri nemashoko aakanga ataurira mambo, vakaarondedzera kuna baba vavo. 12 Baba vavo vakabva vataura navo vachiti: “Saka aenda nokupi?” Naizvozvo vanakomana vake vakamuratidza nzira yakanga yaenda nomunhu waMwari wechokwadi akanga abva kuJudha. 13 Zvino akati kuvanakomana vake: “Ndisungirirei chigaro pambongoro.” Naizvozvo vakamusungirira chigaro pambongoro,+ akaitasva. 14 Akatevera munhu waMwari wechokwadi, akamuwana akagara pasi pomuti mukuru.+ Akabva ati kwaari: “Ndiwe munhu waMwari wechokwadi akabva kuJudha here?”+ iye akati: “Ndini.” 15 Akati kwaari: “Handei kumba unodya zvokudya.” 16 Asi iye akati: “Handikwanisi kudzokera nemi kana kupinda nemi uye handingadyi zvokudya kana kunwa mvura nemi munzvimbo ino.+ 17 Nokuti ndakataurirwa neshoko raJehovha+ kuti, ‘Usadya zvokudya kana kunwa mvura ikoko. Usadzokazve nenzira yawakaenda nayo.’”+ 18 Iye akati kwaari: “Iniwo ndiri muprofita sewe, ngirozi+ yataura neni neshoko raJehovha, ichiti, ‘Mudzose kumba kwako kuti adye zvokudya nokunwa mvura.’” (Iye akamunyengedza.)+ 19 Naizvozvo akadzokera naye kuti adye zvokudya mumba make nokunwa mvura.+ 20 Zvino pavakanga vakagara patafura, shoko+ raJehovha rakasvika kumuprofita akanga amudzosa; 21 akashevedzera kumunhu waMwari wechokwadi akanga abva kuJudha, achiti: “Zvanzi naJehovha, ‘Nokuti wapandukira+ zvakarayirwa naJehovha uye hauna kuchengeta murayiro wawakarayirwa naJehovha Mwari wako,+ 22 asi wadzoka kuti udye zvokudya nokunwa mvura munzvimbo ino yaakataura nezvayo kwauri kuti: “Usadya zvokudya kana kunwa mvura,” chitunha chako hachizovi munzvimbo yemakuva emadzitateguru ako.’”+ 23 Zvino pashure pokunge apedza kudya zvokudya uye pashure pokunge apedza kunwa, akabva amusungirira chigaro pambongoro, kureva muprofita uya waakanga adzosa. 24 Iye akaenda. Gare gare shumba+ yakamuwana mumugwagwa, ikamuuraya,+ chitunha chake chikakandwa mumugwagwa. Mbongoro yakanga yakamira pedyo nacho, uye shumba yacho yakanga yakamira pedyo nechitunha chacho. 25 Zvino vamwe varume vakapfuura nepo, zvokuti vakaona chitunha chacho chakakandwa mumugwagwa, shumba yacho yakamira pedyo nechitunha chacho. Vakabva vapinda, vakazvitaura muguta maigara muprofita uya akanga akwegura. 26 Muprofita akanga amudzosa panzira paakazvinzwa, akabva ati: “Ndiye munhu waMwari wechokwadi uya akapandukira zvakarayirwa naJehovha;+ naizvozvo Jehovha amuisa kushumba, kuti imupwanye yomuuraya, maererano neshoko raJehovha raakataura kwaari.”+ 27 Akataura nevanakomana vake, achiti: “Ndisungirirei chigaro pambongoro.” Naizvozvo vakachisungirira.+ 28 Akabva aenda, akawana chitunha chake chakakandwa mumugwagwa, mbongoro neshumba zvakamira pedyo nechitunha chacho. Shumba yacho yakanga isina kudya chitunha chacho, uyewo yakanga isina kupwanya mbongoro yacho.+ 29 Muprofita wacho akasimudza chitunha chomunhu waMwari wechokwadi ndokuchiisa pambongoro, akadzokera nacho. Nokudaro akasvika muguta romuprofita akanga akwegura kuti amucheme uye amuvige. 30 Naizvozvo akaisa chitunha chake muguva rake; vakaramba vachimuchema+ vachiti: “Maiwe, hama yangu kani!” 31 Apedza kumuviga, akati kuvanakomana vake: “Kana ndafa mundivige muguva rakavigwa munhu waMwari wechokwadi. Muise mapfupa angu pedyo nemapfupa ake.+ 32 Nokuti chokwadi shoko raakashevedzera achishandisa shoko raJehovha kuatari+ iri muBheteri nokudzimba dzose dzenzvimbo dzakakwirira+ dziri mumaguta eSamariya+ richaitika.”+ 33 Pashure peizvi, Jerobhoamu haana kutendeuka panzira yake yakaipa, asi akagadza vapristi venzvimbo dzakakwirira achivatora pavanhuwo zvavo.+ Aipa ani naani aizvifarira simba,+ achiti: “Ngaave mumwe wevapristi venzvimbo dzakakwirira.” 34 Chinhu ichi chakaita kuti imba yaJerobhoamu+ itadze uye chakava nguva yokuvabvisa nokuvatsakatisa panyika.+